Daawo Xildhibaan Dheeg oo ka tirsan Golaha Guurtida oo sharaxaad ka bixiyey Xeerkii Kufsiga. Gudi ay u saareem buugii Guribarwaaqo ee haweenka lagu aflagaadeeyay iyo Jabhada Caare | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Daawo Xildhibaan Dheeg oo ka tirsan Golaha Guurtida oo sharaxaad ka bixiyey Xeerkii Kufsiga. Gudi ay u saareem buugii Guribarwaaqo ee haweenka lagu aflagaadeeyay iyo Jabhada Caare
Published on October 7, 2018 by sdwo · No Comments
Xildhibaan dheeg ayaa sheegay in xeerka kufsiga markii guurtida loo keenay ay qodobo wax ka bedeleen sidaana ugu codeeyeen oo ay wakiilada ku celiyeen. Golahii wakiiladuna intay qodobadii guurtidu soo bedeshay ka saareen ay madaxweynahii u gedbiyeen. madaxweynahiina isagoon iska hubsan uu sidaa ku saxeexay xeerkii diinta islaamka ka hor imanayey. Dhinaca arinka buuga Guri Barwaaqo wuxuu sheegay in gudi dhaqanyaqaan ah oo guurtida ka tirsan loo saaray inay go.aan lagu qanco ka soo saaraan. Dhinaca Jabhada Caare wuxuu sheegay in madaxweynaha isagoon 3 biloodba ku fadhiyin kursiga ay kala sii hadleen in dhibato dalka ku soo socota uu hada madaxweynahu ka hortago oo uu la kulmo saraakiisha garxajis ee cabansysay ilaa xukuumadii hore.
Imika markii ay dhacday waxay madaxweynaha u sii sheegeena waxaanu is nidhi 10kiinii nin ee guurtida ahaa hadana kala kulma oo dhaha waxii aan hore kaagala sii hadalnay waakaas dhacee imikana intaanay inagu sii balaadhan madaxweyne xalkeeda doon laakiin nasiib daro wuu na diiday in madaxweynahii uu mardanbe nala kulmo. daawo waraysigan oo dhamays tiran.